Liiska 20-ka Xiddig Ee Ugu Qaalisan Ee Sanadka 2020 Oo La Soo Saaray
Ramzi Yare	 Jun 9, 2020
Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayuu si aad ah hoos ugu dhacay qiimaha ay ka joogaan suuqa iibka ciyaartoygan, waxaanay sababta ugu weyn tahay da’dooda oo kusii dhowaanaysa waqtigii ay hawl-gabka noqon lahaayeen. Xiddiga reer France ee…
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay dalab ka gudbisay xiddig Kai Havertz
Ramzi Yare	 Jun 6, 2020
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay dalab 71 milyan ah ka gudbisay xiddiga kooxda Bayer Leverkusen ee Kai Havertz Waxana ay diyaar u yihiin in ay kooxda u ogolaadaan in ay sii haystaan xiddiga xilli ciyaareedka dambe sida ay…
Timo Werner ayaa Liverpool fariin u diray kadib markii uu ogolaaday in uu ku biiro kooxda chelsea
Xiddiga weerarka kooxda RB Leipzig ee Timo Werner ayaa Liverpool fariin u diray kadib markii uu ogolaaday in uu ku biiro kooxda chelsea sida ay sheegayaan wararku. Timo Werner ayaa bartilmaameed u ahaa kooxda Liverpool si weyna loola…
Man United Ku Ciyaari Doonto Shaxda Dabka Ah Hadii Ay Hesho Kai Havertz & Jadon Sancho
Ramzi Yare	 Jun 2, 2020
Kooxa kubada cagta ee Man United ayaa heli doonta weerar waali ah xilli ciyaareedka dambe hadii ay Bundesliga kala soo wareegto laba xiddig suuqa kala iibsiga xagaaga. Man united ayaa inta badan ku dhibaatootay weerarka xilli…
Liverpool Oo Iska Iibineysa ciyaartooy Si ay Hishiiska Timo Warner Ugu Guuleystaan
Ramzi Yare	 May 31, 2020
Liverpool ayaa sugeysa in sedex ka mid ah ciyaartooyda kooxda ay huleelaan si dhankooda awood ugu yeeshaan bixinta mushaarka xiddiga RB Leipzig ee Warner kaasi oo ay doonayaan in ay xagaagaan helaan . Timo Warner ayaa bartilmaameed xooggan…
Bayern Munich ayaa guul ka gaartay kooxda ay Xafiiltamaan ee Borussia Dortmund
Ramzi Yare	 May 27, 2020
Kooxda Bayern Munich ayaa guul ka gaadhay kooxda ay Xafiiltamaan ee Borussia Dortmund kulan ka tirsanaa todobaadkii 28-aad ee horyaalka Bundesliga. Kulanka ayaa ahaa mid ay kooxda Borussia Dortmund ka dar-dar fiicnayd kooxda Bayern iyaga…